Askari Dad ku dhaawacay Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Askari Dad ku dhaawacay Muqdisho
Askari katirsan Ciidanka Dowladda Soomaliya,ayaa maanta labo Ruux oo ah Shacab ah waxa uu ku dhaawacay wadada ka baxda Isgooyska Dabka ee aada Suuqa Bakaaraha,gaar ahaan Iskuulka dhagax Tuur ee Muqdisho.
Dadka dhaawacmay ayaa kala ahaa Wade Mooto Bajaaj iyo Ruux kale oo watay Gaari Dameer, waxaana falkan uu yimid kadib markii Moota Bajaajta ay Biyo Wasaq ah gaarsiisay Askariga,taas oo sababtay in Askariga uu rasaas ku furo dadkaasi.
Goob jogayaal ayaa sheegay in Dadka dhaawacmay loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla Magaalada Muqdisho,si Xaaladooda Caafimad loola tacaalo,waxaana la tilmaamay in Askariga dhibka geystay uu goobta iskaga baxsaday.
Dhinaca kale Wararka qaar ayaa sheegaya in Darawelka Mooto Bajaajta ay Xaaladiisa aad u liitay.
Sikastaba ha ahaate dhacdooyinka noocan oo kala ah aynan ku cusbeen Magaalada Muqdisho,iyadoona inta badan Askarta Dowladda mararka qaar ay dhibtaato u geystaan Wadayaasha Mooto Bajaajta ee ka shaqeystaa Magaalada Muqdisho.
Previous articleSafaaradda Mareykanka Ku Lahaa Dalka Tunisia Oo Maanta La Xidhay Iyo Sababta
Next articleShirkadaha SAOG Ee Cumaan Iyo MSG Ee Somaliland Oo Ku Heshiiyay Inay Wershad Sibidh Ka Sameeyaan Berbera